Sool: Maamulka Iyo Guddiga Abaaraha Oo Ka Hadlaya Heerka Abaaraha – Goobjoog News
Iyadoo ay sii adkaanayso xaalada abareed ee ka jira gobolka Sool ayaa gudiga abaaraha Iyo Badha-saabka gobolka Sool Cabdi khayre Dirir ayaa baaq-qaylo dhaan ah u diray maamulka Somaliland inay u soo gurmadaan.
Kulan-kan qeylo dhaanta ah ayaa lagu qabtay xafiiska badhasaabka waxaa ugu horayn halkaasi kahadlay gudoomiyaha gudida abaaraha Sh. Axmed Maxamed Saleban.
“Abaartu xaaladeyda waa ay sii cuslaatay, bisha Janaayo ayaan mareynaa, waa diraac bartankeeda ilaahy raxmadiisa way furan tahy, waqtigii roobka lafilan jiray maahan, dadkii hadda markay ku adkaatay meelihii howdka ahaa biyihii booyadaha lagu shubi jiray ayn noqdeen waxyar waxay iskugu soo arooreen, meelaha bariga magaalada Laascaanood iyo galbeedka magaalada Laascaanood ceelasha dulka leh ayay hareerahooda ay soo dageen iyagoo xoolahooda ay iskugu jiraan kuwo xoolihii ka dhamaaday qaar 400 neef lahaan jiray oo hadda u hartay 2 neef oo ay hor tubanyihiin miday iibsadaan iyo mid ay caano kamaalaan midna majiro”.
Dhinaca kale waxaa isna halkaasi ka hadlay mayarta degmada Laascanod Cismaan Saleeban Jaamac waxa uu isna baaq udiray bulshada Gobolka Sool isagoona ugu baaqay in la isugurmado.
Ugu danbayn Badhasaab-ka Gobolka Sool ayaa baaq Qaylo-Dhaan ah u diray xukuumada Somaliland oo ugu baaqay in ay si deg deg ah dadkan ugu soo Gurmadaan xaaladuna ay tahay mid adag aana la eegan karin.